How to Prevent Skin Infection in Children During Thingyan - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သင်ျကွနျရကေစားသူတှအေနနေဲ့ ပူပွငျးတဲ့နရေောငျကွောငျ့ အသားအရညျပကျြစီးတာ၊မသနျ့ရှငျးတဲ့ရတှေကွေောငျ့ အရပွေားယားယံတာ၊ပိုးဝငျတာမြိုးတှဖွေဈတတျပါတယျ။
သားသားမီးမီးတှရေဲ့အရပွေားလေးတှဟော နုနုနယျနယျလေးတှမေို့ ပိုမိုထိခိုကျပကျြစီးလှယျပါတယျ။ မမေတေို့အနနေဲ့ သင်ျကွနျမှာဆော့ကစားမယျ့ သားသားမီးမီးလေးတှမှော အရပွေားပွသနာလေးတှမေဖွဈရလအေောငျ ဒီလိုမြိုးလေး တှေ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ:
(အပူခြိနျအရမျးမွငျ့ခြိနျတှမှော ရကေစားနားဖို့ သတငျးစာတှေ တီဗီအစီအစဉျတှမှော အခြိနျနာရီတှေ ကွငွောခကျြထုတျပွနျလေ့ ရှိပါတယျ။)
နပေူထဲမထှကျမီ နရေောငျကာခရငျမျ လိမျးပေးပါ။
(နရေောငျကာခရငျမျဟာ တဈခါလိမျးရုံနဲ့တဈနလေုံ့း မခံတာကွောငျ့ မကွာမကွာပွနျလိမျးပေးပါ။) ဖွဈနိုငျလြှငျ နရေောငျဒဏျခံနိုငျအောငျ အကြီင်္လကျရှညျ ဘောငျးဘီရှညျဝတျဆငျပေးပါ။
မသနျ့ရှငျးတဲ့ရတှေကွေောငျ့ အရပွေားထိခိုကျနိုငျကွောငျး ကလေးနားလညျတဲ့ စကားလုံး ၊ဥပမာတှနေဲ့ရှငျးပွပါ။
ကလေးအသကျအရှယျနဲ့သငျ့လြျောမယျ့ လိုးရှငျးတဈမြိုးမြိုး လိမျးပေးပါ။
ဒါတှဖွေဈရငျ ဆေးခနျးပွပါ ???
သင်္ကြန်ရေကစားသူတွေအနေနဲ့ ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကြောင့် အသားအရည်ပျက်စီးတာ၊မသန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့် အရေပြားယားယံတာ၊ပိုးဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတွေရဲ့အရေပြားလေးတွေဟာ နုနုနယ်နယ်လေးတွေမို့ ပိုမိုထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ မေမေတို့အနေနဲ့ သင်္ကြန်မှာဆော့ကစားမယ့် သားသားမီးမီးလေးတွေမှာ အရေပြားပြသနာလေးတွေမဖြစ်ရလေအောင် ဒီလိုမျိုးလေး တွေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်:
(အပူချိန်အရမ်းမြင့်ချိန်တွေမှာ ရေကစားနားဖို့ သတင်းစာတွေ တီဗီအစီအစဉ်တွေမှာ အချိန်နာရီတွေ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါတယ်။)
နေပူထဲမထွက်မီ နေရောင်ကာခရင်မ် လိမ်းပေးပါ။
(နေရောင်ကာခရင်မ်ဟာ တစ်ခါလိမ်းရုံနဲ့တစ်နေ့လုံး မခံတာကြောင့် မကြာမကြာပြန်လိမ်းပေးပါ။) ဖြစ်နိုင်လျှင် နေရောင်ဒဏ်ခံနိုင်အောင် အကျီင်္လက်ရှည် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ဆင်ပေးပါ။
မသန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့် အရေပြားထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ကလေးနားလည်တဲ့ စကားလုံး ၊ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြပါ။
ကလေးအသက်အရွယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် လိုးရှင်းတစ်မျိုးမျိုး လိမ်းပေးပါ။
ဒါတွေဖြစ်ရင် ဆေးခန်းပြပါ ???